I-10x17 Podcast: I-FaceTime inika iApple ixesha elinzima | IPhone iindaba
Asikayigqibi inyanga yokuqala yonyaka okwangoku kwaye sele sinee-Apple romps. Eyokuqala yavela kwisandla samanani ezoqoqosho, esesibini sivela kubucala nakukhuseleko. Inkampani eqhayisa ngobume obugqwesileyo bezezimali kunye nokukhuseleka okusemgangathweni iye yafumana ukubethwa kabini ngokulandelelana okuyijongileyo. Sithetha ngesiphene sokhuseleko seFoTTime ebesikade siphambili kuwo onke amajelo osasazo namhlanje kunye noko kwenziwe nguApple ukuyiphepha (kwaye ayenzanga ngelo xesha). Sikwajongana nezinye iindaba ezivela kwihlabathi lobugcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » podcast » IPodcast 10 × 17: Ixesha lobuso linika iApple ixesha elinzima
IApple inikezela ngeziphumo zekota yesibini ebalaseleyo kwimbali yayo